मल सुकाउने आपूर्तिकर्ता र कारखानाको लागि सस्तो औद्योगिक उच्च तापमान प्रेरित ड्राफ्ट फ्यान | YiZheng
औद्योगिक उच्च तापक्रम प्रेरित ड्राफ्ट फ्यान के हो?
•ऊर्जा र शक्ति: थर्मल पावर प्लान्ट, फोहोर जलाउने पावर प्लान्ट, बायोमास ईन्धन उर्जा संयंत्र, औद्योगिक फोहोर गर्मी रिकभरी उपकरण।
•धातु गलाउने: खनिज पाउडर sintering (Sintering मेसिन) को हावा उड्ने, फर्नेस कोक उत्पादन (फर्नेस कोक ओभन)।
•ग्यास र सामग्री वितरण: सामान्य एयर डेलिभरी, उच्च-तापक्रमको हवाइ वितरण, दहनशील ग्यास वितरण, संक्षारक ग्यास वितरण, अशुद्धता वितरणको साथ ग्यास मिश्रित।
•कोइला पाउडर, कण सामग्री / पाउडर सामग्री / खण्ड सामग्री / फाइबर सामग्रीको डेलिभरी।
•अन्य: औद्योगिक उपकरणहरूको दबाव र विघटन मुहर, औद्योगिक फोहोर ग्यासको पुनःप्राप्ति, हवा र आपूर्ति र खाद्य र औषधि उत्पादन लाइन को सुख्खा।
औद्योगिक उच्च तापमान प्रेरित ड्राफ्ट फ्यानका सुविधाहरू
•उच्च ग्यास प्रेशरलाई आउटपुट गर्दै, र ठूलो हवा प्रवाह मात्रा प्रदान गर्दछ, कम आवाज।
•ब्लेड कोण अनुकूलन डिजाइन, उच्च पोशाक प्रतिरोधी, लामो सेवा जीवन को माध्यम बाट जाँदै।
•फ्यानको भोल्युम र एयर डिम्पर द्वारा चलाउन दबाब लाई लचिलो रूपले समायोजित गर्न सक्दछ। मिल्दो चर आवृत्ति मोटरको माध्यमबाट फ्यान गति परिवर्तन गरेर फ्यानको दबाब र भोल्युम पनि समायोजित गर्न सक्दछ।
•उच्च प्रसारण दक्षता र तल्लो फ्यान प्रणाली उर्जा।
•मोटर शाफ्ट र ट्रान्समिशन शाफ्टको लागि लचिलो जडान, टेन्शन वा बेल्ट परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दैन, कम मर्मत कार्य निकास प्रशंसक।
•विभिन्न धुलो लोड हुने अवस्थालाई पूरा गर्न सक्छ।
•तापमान र कम्पन सेन्सरहरूको लागि आवास आवास भण्डारण स्थापना स्थान, फ्यान चलिरहेको अनुगमन उपकरणको सजिलैसँग स्थापना गर्न सक्दछ।
•चिनियाँ अग्रणी मोटर निर्माता (वा ग्राहक आवश्यक) को ऊर्जा बचत मोटर चयन गर्दै, भरपर्दो गुणस्तर, कम ऊर्जा खपत।
•ग्राहकको प्रदर्शन आवश्यकताहरु अनुसार डिजाइन अनुकूलित गर्दै।
•ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार उच्च गुणस्तरको कार्बन स्टील निर्माण, वा स्टेनलेस स्टील र अन्य धातु सामग्रीहरू अपनाउने।
•तपाईको चयनका लागि बिभिन्न वैकल्पिक अवयवहरू।
औद्योगिक उच्च तापमान प्रेरित ड्राफ्ट फ्यान भिडियो प्रदर्शन
औद्योगिक उच्च तापमान प्रेरित ड्राफ्ट फ्यान मोडेल चयन
गति r / मिनेट
कुल दबाव Pa
फ्लो मि3/ h
१ 198 -3-3-२24
20 44२०-884 .१
१ 64 646440-२5२40०
२9-3 -7777
9 53 78-.7555२
१29 २9-१85 9
अघिल्लो: तातो हावा स्टोभ
अर्को: चक्रवात पाउडर धुलो कलेक्टर
परिचय पोर्टेबल मोबाइल बेल्ट कन्वेयर भनेको केको लागि प्रयोग गरिन्छ? पोर्टेबल मोबाइल बेल्ट कन्वेयरलाई रासायनिक उद्योग, कोइला, खानी, विद्युतीय विभाग, प्रकाश उद्योग, अन्न, यातायात विभाग आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो दाना वा पाउडरमा विभिन्न सामग्रीहरू पुर्‍याउन उपयुक्त छ। थोक घनत्व ०.~ ~ २.tt / m3 हुनुपर्छ। यो ...